अर्को वर्षभित्र विवाह बन्धनमा बाँधिने पुजाको खुलाशा तर को सँग ? - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
अर्को वर्षभित्र विवाह बन्धनमा बाँधिने पुजाको खुलाशा तर को सँग ?
काठमाडौँ । नेपाली अभिनेत्री पूजा शर्मा अहिलेको समय निकै चर्चामा आइरहेकी छिन् । अभिनेता आकाश श्रेष्ठसँग नाम जोडिएको उनलाई आकाश श्रेष्ठसँग उनले चित्त दुखाएका गत महिना दिएको एक अन्तवार्तामा प्रष्ट थियो ।
पूजाको आकाशसँग जति घनिष्टता भने अरु अभिनेतासँग भएको थिएन । यसैले त उनीहरु प्रेममा रहेको मान्ने धेरै छन् । ‘रामकहानी’ पछि फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको यो जोडी सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा समेत कहिल्यै छुटिएन ।उनीरुको केमेस्ट्री रुचाइएका कारण दर्शकले उनीहरुलाई विवाह गर्न दबाब दिने गरेका छन् । तर, उनीहरुले कहिल्यै प्रेम स्वीकार गरेनन् ।
यस्तैमा, अभिनेत्री पूजा शर्माले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगको गफमा आफ्नो जीवनमा कोही विशेष व्यक्ति आएको खुलासा गरेकी छन् । एक फ्यानले ‘कसम सिंगल हो ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘सिंगल नभनिहालुम् । मेरो जीवनमा कोही आएको छ र उसलाई बुझ्दै छु । तर, त्यो व्यक्ति आकाश होइन ।’
सही समय आएपछि आफ्नो जीवनमा आएको व्यक्तिको बारेमा खुलासा गर्ने उनले बताएकी छन् । अर्को वर्षभित्र आफू विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा रहेको समेत उनले बताइन् । बिहेबारे उनी भन्छिन्, ‘जीवनमा नयाँ मान्छे आएर बिहे गर्न लागेको चाहिँ होइन । अब बेला पनि भयो । करिअर पनि राम्रो भयो, सोचेका कुरा पनि भए । अब परिवार अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने भएर हो ।’